तीज बिशेष:महिलाको आस्थाप्रती पुरुषको दायीत्व-खप्तडी
दिक्षा बस्नेत खप्तडी
तीजमा पतीको दिर्घायु र सु-स्वास्थ्यको कामनागरी निरहार ब्रत बसेर रातभरी आफ्नो अटल सौभाग्यको प्रतिकस्वरूप दियो, कलश स्थापना गरी भोलिपल्ट गोदान पुर्णपात्रो गरेर ब्रत तोड्ने चलन छ।
बिबाहिता एब अबिबहिता नारी दुबैले यो पर्ब मनाउछन। खासगरी भाद्रशुल्क त्रितियामा पर्ने तीजलाई हिन्दु महिलाहरुले तीन दिनसम्म मनाउने चलन छ। दर खाने कार्यबाट प्रारम्भ हुने तीज पर्वको भोलिपल्ट बिहानैदेखि निरहार ब्रत बसी भगवान शिवको पुजा आराधनागारी तीज मनाउछन। ऋषिपंचमीमा भगवान शिवको पुजा गरेपछि समापन हुने यस चाडको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
धर्तीकी सृष्टिकर्ता, ममताकी खानी, हामी नारी आजसम्म पनि समस्याभित्र जकडिएर बाचेका छौ। बलात्कारको सिकार, घरेलु हिँसा, असमानता, अशिक्षा, हामीले जिबनका सुरुवातदेखि भोग्दै आएका छौ। अझ विज्ञानका अविस्कारसंगै गर्भमै छोरी भएको थाहा पाए भ्रुण अबस्थामै पनि हामी फालीन्छौ।
अत्याचारको यस्तो चरम सिमा नाघेर यो परिवेशमा आइपुग्दा कहिले जेन्डरका कुरा, कहिले तेत्तिस प्रतिशतका कुरा, पिछाडिएका दलित महिलाका कुरा, मुक्त कमैया, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिँसा, छोरीलाई पैत्रिक सम्पतिमा समान अधिकार आदी मुद्दालाई समेटेर अबका नारी चुलाचौका देखि माथी उठी सभाहल, बैठ, सेमिनार सम्म पुगेर नारी मुक्तीको आबाज बुलन्द पार्दैछन ।
तर, एकथरी महिला दिदिबहिनी साउन लाग्न पाएको छैन तीजको नाममा गौथलीझैँ चिरबिर गर्दै बुरुकबुरुक उफ्रिन थालेका देखिन्छन। टेलिभिजन र रेडियोतिर पनि तीजका नाममा अनेक गीत बज्न थालेका छन्। सांगीतिक संदेशहरुले तीजको सदुपयोग कति गरे या गरेनन आफैले महसुश गर्ने कुरा हुन्। यो प्रवृतिले समाजमा हुर्कदै गरेका बालमनस्तलमा देखासेखिको जरा गाड्छ भने धेरै अलापबिलापका गीतले आत्मबल गुमाएको संदेश दिन्छ।
ग्रीकजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्लेटोको समयमा पनि दास र महिलालाई भोट दिने अधिकार थिएन। त्यस्तै आर्थिक रुपमा सबल देश जापानमा महिलाको प्रगति स्वामित्वमा खासै बिकाश भएको छैन। केहि वर्षअघि मात्रै भारतमा सम्पन्न चुनावमा ११.५५ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता देखिएको थियो। जुन कुनै समय इन्दिरा गान्धीजस्ता महान महिलाले नेतृत्व गरेको मुलुक हो। त्यसैले भित्रि चेतना नभई समाजमा परिबर्तन आउंदैन।
तर यो चाडले पुरुषमा पनि गम्भीर दायीत्वबोध हुनुपर्ने देखिन्छ। महिलाप्रति गरिने माया, प्रेम, आपसी सदभाब यसका सुन्दर पक्ष हुन् भने यसविपरीत केहि पुरुष पात्रहरुमा अझै पनि केहि नकारात्मक भाबंना एब अभिलाषा भएको पाइन्छ। पुरुषहुनुको अहमता र मर्द हो म भन्ने नकारात्मक सोचाइको कुलतको बाटोले महिला माथि हिँसा रहेको पाइन्छ। के त्यस्ता पतिका लागी गरिने नारीको तीज ब्रत सार्थक होला?
पुरुषले नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिबर्तन नआएसम्म नारीको तीज ब्रतको फल शुन्य हुन्छ। यसप्रति नारी पुरुष दुवै गम्भीर हुनु जरुरी छ। के हाम्रा नेपाली चेलीहरुको जिबन मार्मिक र संघर्षपुर्ण छैनन्? चाहे राजधानीमा दिनभरी टेम्पो चलाएर जिबिका चलाउने चेली हुन्, चाहे इन्द्रचोकको सडक गल्लीपेटीमा घाटी सुक्ने गरी कराउदै सामान बेच्ने महिला, ती सबै स्वाभिमानी नेपाली चेली हुन्। त्यसैले सबै दिदि, बहिनी आमाहरुमा तीजको सुभाकामंना टक्र्याउन चाहन्छु। साथै महिला प्रतिको सकारात्मक परूषदायीत्व निरन्तर कामना गर्दछु।